Xoog uu sheegadka ragga uu geeysto dumarka iyo ehelka dhexdiisa | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Xuquuqda iyo waajibaadka qofka / Xoog uu sheegadka ragga uu geeysto dumarka iyo ehelka dhexdiisa
Heeganka dumarka (Kvinnojour) waa urur siiya caawimaad iyo gabbaad dumarka iyo carruurta ehelka dhexdiisa loogu xoogsheegtay. Ururrada heeganka dumarka badankood waxaa ka shaqeeya ururro samafal oo ay caawiyaan dad tabarucyaal ah. Ururrada heeganka dumarka iyo gabdhaha waxaa laga helaa dalka oo dhan.
Ururada jiro waxaad ka heli kartaa bogga internetka: www.unizon.se
Haddii aad lagu geeystay hanjabaad iyo xoog-isticmaalid aada uu baahan tahay caawinaad, waxaad wici karta talefoonka amaanka dumarka (Kvinnofridslinjen). Kvinnofridslinjen wuxuu furan yahay saacad walba. Waana lacag la'aan. U ma baahnid in aad sheegto qofka aad tahay marka aad soo wacayso. Lambarka telefoonka: 020-50 50 50.
Boggga internetka Kvinnofridslinjen waxaa laga helaa warbixino ku qoran afaf badan, www.kvinnofridslinjen.se.
Haddii aad dumar tahay waxaa sido kale wici kartaa Terrafem. Shaqaalaha Terrafem waxeey ku hadlaan 50 af. Waxaad wici kartaa isliin ilaa jimco inta uu dhaxeeyso 8 iyo 17. Waana lacag la'aan. Sido kale waxaad reebi kartaa magacaada iyo lambarkaada telefoonka si ee Terrafem ku soo wacaan kadib. Lambarka telefoonka: 020-52 10 10.
Haddii aad su'aalo qabto ama aad u baahan tahay caawimaad, waxaad la xiriirtaa qaabilaadda dhallinyarada, qaybta cudurrada dumarka ama isbitaalka dumarka. Dumar badan ayaa caawimaad hela, daryeelka kadibna ku noolaada nolol caadi ah.